“Monwɛn Mma Mpaebɔ” | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Momma mo adwenem nna hɔ, na monwɛn mma mpaebɔ.”—1 PET. 4:7.
Mpae ahorow no mu nea ɛwɔ he na wopɛ sɛ wobɔ paa?
Adɛn nti na ɛsɛ sɛ nokware Kristofo bɔ mpae daa?
Sɛ wobɔ mpae ma afoforo a, henanom na wonya so mfaso?
1, 2. (a) Adɛn nti na ehia paa sɛ ‘yɛwɛn ma mpaebɔ’? (b) Nsɛm bɛn na ɛsɛ sɛ yebisa yɛn ho?
ƆBARIMA bi a kan no na ɔyɛ adwuma anadwo kae sɛ: “Sɛ woyɛ adwuma anadwo mũ nyinaa na aka kakra ma anim atete a, saa bere no deɛ, woanka ntinim, wobɛda.” Sɛ obi yɛ adwuma anadwo a, ebia ɔne damfo yi bɛyɛ adwene. Ɛnnɛ nso Satan wiase no akɔ n’anim; aka kakraa bi na n’awiei aba. Saa bere yi paa na sɛ Kristoni bi antintim a ɔbɛda. (Rom. 13:12) Nanso ɛnyɛ bere a yɛda ni. Nokwasɛm ne sɛ, obi da saa bere yi a, ɛbɛyɛ hu paa! Enti ɛsɛ sɛ ‘yɛma yɛn adwenem da hɔ,’ na ‘yɛwɛn ma mpaebɔ.’—1 Pet. 4:7.
2 Seesei yɛabɛn Satan wiase no awiei pɛɛ, enti ɛyɛ papa sɛ yɛn mu biara bisa ne ho sɛ: ‘Enti migye bere paa bɔ mpae? Ɛyɛ a mesakrasakra me mpaebɔ mu? Mebɔ mpae daa? Ɛyɛ a mebɔ mpae ma afoforo anaa nea mihia nko ara na mebɔ ho mpae? Twaka bɛn na mpae ne me nkwagye wɔ?’
SAKRASAKRA WO MPAEBƆ MU
3. Mpae bɛn saa na yebetumi abɔ?
3 Bere a ɔsomafo Paulo kyerɛw Efesofo no, ɔkae sɛ ‘wɔmmɔ mpae nyinaa bi.’ (Efe. 6:18) Yɛbɔ mpae a, yɛtaa srɛ Yehowa sɛ ɔmma yɛn nea yehia anaa onyi yɛn mfi yɛn haw mu. “Mpaebɔ Tiefo” no dɔ yɛn, enti ɔyɛ aso tie yɛn adesrɛ. (Dw. 65:2) Nanso ɛsɛ sɛ yɛsakrasakra yɛn mpaebɔ mu. Ɛtɔ da a, yɛn mpaebɔ betumi ayɛ ayeyi, aseda, anaa nkotɔsrɛ.
4. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yeyi Yehowa ayɛ daa wɔ yɛn mpaebɔ mu?
4 Yɛwɔ nneɛma pii nti a ɛsɛ sɛ yeyi Yehowa ayɛ wɔ yɛn mpaebɔ mu. Sɛ yɛhwɛ “n’ahoɔden nnwuma” ne “ne kɛseyɛ bebrebe” a, yɛrentumi nka yɛn ano ntom; twa ara na etwa sɛ yeyi no ayɛ. (Monkenkan Dwom 150:1-6.) Wo deɛ hwɛ Dwom 150. Dwom yi nkyekyɛm yɛ asia pɛ, nanso ɛka no mpɛn 13 sɛ yenyi Yehowa ayɛ! Odwontofo foforo nso kyerɛe sɛ ɔdɔ Onyankopɔn ampa. Ɔtoo dwom sɛ: “Miyi wo ayɛ mpɛn ason da koro, wo trenee atemmusɛm nti.” (Dw. 119:164) Anokwa, Yehowa fata ayeyi. Ɛnde, wunnye ntom sɛ ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpae yi no ayɛ “mpɛn ason da koro,” kyerɛ sɛ yeyi no ayɛ daa?
5. Sɛ yɛbɔ mpae na yɛda Yehowa ase a, ɛboa yɛn sɛn?
5 Ade biako nso a ɛho hia wɔ yɛn mpaebɔ mu ne aseda. Paulo tuu Kristofo a wɔwɔ Filipi no fo sɛ: “Munnnwinnwen biribiara nnhaw mo ho, na mmom momfa mpaebɔ ne nkotɔsrɛ ne aseda so mfa mo adesrɛ nto Onyankopɔn anim ade nyinaa mu.” (Filip. 4:6) Yɛte Satan wiase no nna a edi akyiri mu, na “bonniayɛfo” atwa yɛn ho ahyia. Enti ɛho hia sɛ yefi yɛn komam da Yehowa ase wɔ ne papayɛ ho. Eyi bɛkyerɛ sɛ yɛyɛ nnipa a wɔwɔ ayɛ. (2 Tim. 3:1, 2) Nokwasɛm ni, nnipa dodow no ara nni ayɛ, na sɛ yɛanhwɛ yiye a, saa su no bɛka yɛn. Enti sɛ yɛbɔ mpae na yɛda Nyankopɔn ase a, yɛn ani begye, na yɛrensuasua ‘anwiinwiifo a nea wɔwɔ biara nsɔ wɔn ani’ no. (Yuda 16) Bio nso sɛ abusua ti ne n’abusua rebɔ mpae na ɔda Yehowa ase a, ɛbɛhyɛ ne yere ne ne mma nkuran ma wɔn nso ada Yehowa ase wɔ wɔn mpaebɔ mu.
6, 7. Dɛn ne nkotɔsrɛ? Bere bɛn na yebetumi de nkotɔsrɛ akɔ Yehowa anim?
6 Nkotɔsrɛ nso ho hia paa wɔ mpaebɔ mu. Sɛ yɛka nkotɔsrɛ a, ɛyɛ mpae a yɛde yɛn koma nyinaa bɔ no anibere so. Bere bɛn saa na yebetumi de nkotɔsrɛ akɔ Yehowa anim? Bere a yɛrehyia ɔtaa anaa yarewuo bi abɔ yɛn no, yehia mmoa paa. Saa bere no, ɛnyɛ dɛn ara a, nkotɔsrɛ na yɛde bɛkɔ Onyankopɔn anim. Ɛnde, bere a yɛrehyia tebea a ɛyɛ den nkutoo na ɛsɛ sɛ yɛde nkotɔsrɛ kɔ Yehowa anim?
7 Wo deɛ yɛnhwɛ mpae a Yesu kyerɛɛ n’asuafo no. Ɔkaa Onyankopɔn din, n’Ahenni, ne n’apɛde ho asɛm. (Monkenkan Mateo 6:9, 10.) Nsɛmmɔne adonnɔn wiase no na nnipa nniso ntumi nyɛ nneɛma nketenkete a ɔmanfo hia mpo mma wɔn. Enti ɛyɛ ne kwan so sɛ yɛbɔ mpae sɛ Onyankopɔn din ho ntew na n’Ahenni mmeyi Satan nniso bɔne no mfi asase so. Afei nso ɛsɛ sɛ yɛsrɛ Yehowa sɛ ɔmma n’apɛde nyɛ hɔ wɔ asase so te sɛ ɔsoro. Ɛnde, momma yɛnwɛn na yɛmmɔ mpae ahorow nyinaa bi.
‘MONKƆ SO MMƆ MPAE’
8, 9. Petro ne asomafo a aka no antumi anwɛn wɔ Getsemane turom hɔ, nanso adɛn nti na ɛnsɛ sɛ yɛpere yɛn ho bu wɔn atɛn?
8 Ɔsomafo Petro a otuu Kristofo fo sɛ ‘wɔnwɛn mma mpaebɔ’ no, bere bi ɔno ara mpo antumi anwɛn. Bere a Yesu wɔ Getsemane turom rebɔ mpae no, Petro ne asomafo a wɔka ne ho no dedae. Ná Yesu aka akyerɛ wɔn sɛ ‘wɔnkɔ so nwɛn na wɔmmɔ mpae,’ nanso wɔantumi anwɛn.—Monkenkan Mateo 26:40-45.
9 Ɛnsɛ sɛ yɛpere yɛn ho bu Petro ne asomafo a aka no atɛn sɛ wɔantumi anwɛn. Mmom ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ nneɛma pii kɔɔ so saa da no, enti na wɔabrɛ. Wo deɛ hwɛ, asomafo no kosiesiee baabi a wobedi Twam no, na eduu anwummere no wohyia dii afahyɛ no. Afei, Yesu de Awurade Anwummeduan no sii hɔ de kyerɛɛ ɔkwan a wɔbɛfa so akae ne wu. (1 Kor. 11:23-25) Afei bere a “wɔtoo ayeyi dwom wiei no, wofii adi kɔɔ Ngo Bepɔw no so.” Ná wobetwa kwan kakra afa Yerusalem mmɔnten so ansa na wɔadu hɔ. (Mat. 26:30, 36) Yɛreka yi, ɛbɛyɛ sɛ na anadwo dumien abɔ apa ho koraa. Sɛ yɛwɔ Getsemane turom hɔ saa anadwo no a, ebia anka yɛn nso yɛbɛda. Yesu ankasa hui sɛ asomafo no abrɛ, enti wanka wɔn anim, na mmom ɔkae sɛ ‘honhom no pɛ, nanso honam no yɛ mmerɛw.’
Ɛwom, Petro fomee nanso ‘ɔwɛn maa mpaebɔ’ (Hwɛ nkyekyɛm 10, 11)
10, 11. (a) Dɛn na Petro sua fii nea esii Getsemane turom hɔ no mu? (b) Dɛn na wusua fi nea ɛtoo Petro no mu?
10 Nea esii Getsemane turom hɔ no kyerɛɛ Petro biribi paa. Ná Yesu adi kan aka akyerɛ wɔn sɛ: “Nea ɛbɛba me so no bɛto mo nyinaa hintidua anadwo yi.” Nanso Petro buae sɛ: “Sɛ nea ɛbɛba wo so no bɛto wɔn nyinaa hintidua mpo a, me de, ɛrento me hintidua da!” Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ Petro sɛ ɔbɛpa no mprɛnsa. Nanso Petro annye anni. Mmom ɔkae sɛ: “Sɛ etwa sɛ me ne wo wu mpo a, merempa wo da.” (Mat. 26:31-35) Nanso nea Yesu kae no pɛpɛɛpɛ na Petro yɛe; ɔpaa no. Afei bere a Petro ani baa ne ho so no, ‘osui pii.’—Luka 22:60-62.
11 Yebetumi aka sɛ Petro suaa biribi fii asɛm yi mu, na ɛno akyi no, wannye ne ho anni dodo. Sɛ yɛreka a, mpaebɔ na ɛboaa no. Wo deɛ hwɛ, Petro ankasa na ɔkyerɛw sɛ ‘yɛnwɛn mma mpaebɔ.’ Ɛnde, yetie Bible mu afotu yi anaa? ‘Yɛkɔ so bɔ mpae’ de kyerɛ sɛ yɛdan Yehowa anaa? (Dw. 85:8) Momma yentie ɔsomafo Paulo afotu yi nso: “Nea odwen sɛ ogyina hɔ no nhwɛ yiye na wanhwe ase.”—1 Kor. 10:12.
YEHOWA BUAA NEHEMIA MPAE
12. Dɛn na Nehemia yɛe a yebetumi asuasua?
12 Afei momma yɛnnan nkɔ Nehemia so. Aka bɛyɛ mfe 450 ma Kristo aba no, Nehemia na na ɔhyɛ Persia hene Artasasta nsã. Sɛ yɛreka nnipa a na wɔmfa mpaebɔ nni agorɔ a, Nehemia ka ho. Tebea a na Yudafo no wom wɔ Yerusalem nti, Nehemia “dii mmuada bɔɔ mpae wɔ ɔsoro Nyankopɔn anim” nna pii. (Neh. 1:4) Bere a Artasasta bisaa Nehemia nea enti a n’anim ayɛ mmɔbɔmmɔbɔ no, ‘ntɛm ara na ɔbɔɔ ɔsoro Nyankopɔn mpae.’ (Neh. 2:2-4) Dɛn na efii mu bae? Yehowa tiee Nehemia mpae no, na ɔhwɛe sɛ biribiara bɛkɔ yiye ama ne nkurɔfo. (Neh. 2:5, 6) Yebetumi aka paa sɛ eyi hyɛɛ Nehemia gyidi den!
13, 14. Sɛ yɛpɛ sɛ yɛn gyidi yɛ den na yedi Satan so nkonim a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ?
13 Sɛ yɛbɔ mpae daa sɛnea Nehemia yɛe no a, ɛbɛhyɛ yɛn gyidi den. Satan yɛ otirimɔdenfo, na bere biara ɔhwehwɛ kwan a ɔbɛtow ahyɛ yɛn so. Nea ɔpɛ ara ne sɛ yɛbɛyɛ mmerɛw. Sɛ yɛyare anaa yɛbotow a, ebia yebenya adwene sɛ bere a yɛde kɔ asɛnka bosome biara no nnu hwee wɔ Onyankopɔn ani so. Ebia tebea bi a yɛn mu bi afa mu agyaw yɛn adwinnwen anaa kɔdaanna. Nea Satan pɛ ara ne sɛ yebenya adwene sɛ yɛnsɛ hwee. Onyae a, anka daa yɛn abam abu ma yɛn gyidi ayɛ mmerɛw. Nanso sɛ ‘yɛwɛn ma mpaebɔ’ a, yɛn gyidi bɛkɔ so ara ayɛ den. Bible ka sɛ yɛn gyidi te sɛ kyɛm kɛse a yebetumi de “adum ɔbɔnefo no mmɛmma a ɛredɛw no nyinaa.”—Efe. 6:16.
Sɛ‘yɛwɛn ma mpaebɔ’ a, ɛbɛhyɛ yɛn mpamden ma yɛagyina nsɛnnennen ano (Hwɛ nkyekyɛm 13, 14)
14 Sɛ ‘yɛwɛn ma mpaebɔ’ na yehyia sɔhwɛ bi mpo a, asɛm remfa yɛn ase; yɛbɛkɔ so ara adi Yehowa nokware. Sɛ yehyia sɔhwɛ anaa amanehunu bi a, momma yɛnkae Nehemia na ntɛm ara yɛnkɔ Onyankopɔn anim wɔ mpaebɔ mu. Sɛ Yehowa nsa nnim a, yɛbɛyɛ dɛn atumi agyina sɔhwɛ ano?
BƆ MPAE MA AFOFORO
15. Nsɛm bɛn na ɛsɛ sɛ yɛn mu biara bisa ne ho?
15 Yesu srɛ maa Petro na ne gyidi ansa. (Luka 22:32) Ná Kristoni bi wɔ asomafo no bere so a ne din de Epafra. Osuasuaa Yesu, na ɔyeree ne ho bɔɔ mpae maa ne nuanom a wɔwɔ Kolose no. Paulo kyerɛw Kolosefo no sɛ: “Daa ɔyere ne ho bɔ mpae ma mo, sɛnea ɛbɛyɛ a awiei koraa mubegyina hɔ pintinn, na moanya ahotoso kɛse wɔ Onyankopɔn apɛde nyinaa mu.” (Kol. 4:12) Ɛsɛ sɛ yɛn mu biara bisa ne ho sɛ: ‘Meyere me ho bɔ mpae ma me nuanom a wɔwɔ wiase nyinaa? Mpɛn ahe na mebɔ mpae ma me nuanom a atoyerɛnkyɛm ato wɔn? Da bɛn na mebɔɔ mpae maa anuanom a asɛyɛde da wɔn mmati so wɔ Yehowa ahyehyɛde no mu? Asafo no mufo a wɔwɔ ahokyere mu bɛn na mabɔ mpae ama wɔn nnansa yi?’
16. Ehia sɛ yɛbɔ mpae ma afoforo anaa? Kyerɛkyerɛ mu.
16 Sɛ yɛbɔ mpae ma afoforo a, ebetumi aboa wɔn paa. (Monkenkan 2 Korintofo 1:11.) Ɛyɛ nokware sɛ ɛnyɛ Yehowa asomfo dodow a wɔbɔ mpae anaa mpɛn dodow a wɔbɔ mpae no na ɛbɛhyɛ Yehowa ma wabua. Nanso sɛ n’asomfo pii bɔ mpae a, ohu sɛ wodwen wɔn nuanom ho, na eyi ma ne koma tɔ ne yam na obua saa mpae no. Enti ɛnsɛ sɛ yɛtoto hokwan a yɛwɔ sɛ yɛbɔ mpae ma afoforo no ase koraa. Momma yensuasua Epafra na yɛmmɔ mpae mma yɛn nuanom Kristofo mfa nkyerɛ sɛ yɛdɔ wɔn na yedwen wɔn ho. Yɛyɛ saa a, yɛn ani begye efisɛ “ɔma mu wɔ anigye pii sen ogye.”—Aso. 20:35.
“YƐN NKWAGYE ABƐN”
17, 18. Sɛ ‘yɛwɛn ma mpaebɔ’ a, mfaso bɛn na yebenya?
17 Ansa na Paul reka sɛ “anadwo kɔ n’anim; adekyee abɛn” no, ɔkyerɛwee sɛ: “Munim bere no, sɛ dɔn a ɛsɛ sɛ mufi nna mu sɔre no anya adu, efisɛ seesei yɛn nkwagye abɛn kyɛn bere a yɛbɛyɛɛ gyidifo no.” (Rom. 13:11, 12) Wiase foforo a Onyankopɔn ahyɛ ho bɔ no abɛn, na yɛn nkwagye nso abɛn sen sɛnea yesusuw koraa. Enti ɛnyɛ saa bere yi na ɛsɛ sɛ yɛn gyidi hinhim na yɛda. Afei ɛnsɛ sɛ yɛma kwan ma wiase no gye bere a yɛde bɛbɔ Yehowa mpae no. Mmom ɛsɛ sɛ ‘yɛwɛn ma mpaebɔ.’ Yɛyɛ saa a, ɛbɛboa yɛn ma yɛatena ase “abrabɔ kronkron ne onyamesom pa mu” bere a yɛretwɛn Yehowa da no. (2 Pet. 3:11, 12) Sɛ ampa ara sɛ yɛrewɛn na yegye di paa sɛ wiase bɔne yi awiei abɛn a, yɛde yɛn abrabɔ bɛkyerɛ. Ɛnde, ‘mommma yennnyae mpaebɔ da.’ (1 Tes. 5:17) Afei momma yensuasua Yesu na yɛnhwehwɛ baabi a yɛn nkutoo betumi ne Yehowa akasa. Sɛ yegye bere bɔ Yehowa mpae a, ɛbɛma yɛabɛn no paa. (Yak. 4:7, 8) Hwɛ nhyira ara a yebenya!
18 Bible ka sɛ: “Bere a Kristo wɔ ɔhonam mu no, ɔnam nteɛm a emu yɛ den ne nusu so de adesrɛ ne nkotɔsrɛ baa Nea na obetumi agye no afi owu mu no anim, na ne nyamesuro nti, wotiee no.” (Heb. 5:7) Yesu de nkotɔsrɛ kɔɔ Yehowa anim na ɔde n’adesrɛ too n’anim. Ɔkɔɔ so ara dii Onyankopɔn nokware kosii sɛ ɔde ne som baa awiei wɔ asase so. Eyi nti Yehowa nso anyi ne mu; onyanee no kɔɔ soro, na seesei ɔne owuo abɔ nsianho koraa. Yɛn nso, sɔhwɛ anaa amanehunu biara a yebehyia no, yebetumi adi yɛn soro Agya no nokware. Nokwasɛm ne sɛ daa nkwa da hɔ retwɛn yɛn; nea ehia ara ne sɛ ‘yɛbɛwɛn ama mpaebɔ.’